Ukuphupha imifuno Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Imifuno yinxalenye yemenyu eyahlukeneyo. Ngombulelo kurhwebo lwehlabathi kunye neendlela zangoku ezivumela ukuba sikhule imifuno kude nomhlaba wabo wemozulu, sinokukhetha kwinani elikhulu leentlobo phantse unyaka wonke.
Imifuno yasekhaya ihlala ithandwa kakhulu, ngakumbi iklabishi, iitapile, amatswele, ibroccoli, zucchini, iartichokes, iseleri, ihorseradish, iitumato kunye neminqathe. Kukhethwa ukuba utye imifuno ngexesha elithile lonyaka. Ngaba intwasahlobo yayiya kuba ngaphandle kwe-asparagus entle, ebusika ngaphandle kwe-kale okanye isityu se beet? Ngelixa imifuno ibisoloko iphekwa ixesha elide ukubulala iintsholongwane, okanye ide ibiliswe ukugcina, namhlanje ityiwa nje ingenamqatha okanye njengokutya okuluhlaza.
Mhlawumbi ukuba umntu uphupha imifuno, mhlawumbi bafuna iivithamini ezithile. Umnqweno wemifuno ehambelana nawo uvela ephupheni. Kusenokwenzeka ukuba kukutya kwemifuno, okuthi xa uphupha ungakuthandi konke konke, mhlawumbi ungakuthandi. Kubalulekile ukutolikwa kwamaphupha yintsingiselo enxulumene nemifuno, kodwa kunye neendidi.
1 Uphawu lwephupha «imifuno» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «imifuno» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «imifuno» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «imifuno» - ukutolikwa ngokubanzi
Njengesiqhamo, uphawu lwephupha "imifuno" ibonisa iimfuno zesondo, kodwa kwakhona mpu melelo kunye nophuhliso oluqinisekileyo. Ukutolikwa kwamaphupha, nangona kunjalo, kuxhomekeka ekubeni yeyiphi imifuno ekusetyenzwa ngayo ngokweenkcukacha.
Ukuba, umzekelo, igalikhi, itswele okanye ezinye iintlobo ezinefuthe elinamandla ekuphefumleni ziyatyiwa ephupheni, uphawu lwephupha lumemezela ingxabano. Mhlawumbi umhlobo okanye umntu oqhelene naye ephupheni ufunda ngempazamo into emenzakalisayo. Ngelixa ikhukhamba, iasparagus, kunye nomnqathe ziimpawu zesini ngenxa yesimo sazo, ikhaphetshu ibonisa ukungaxakeki, impilo yesipinatshi, kunye nesaladi imele ukuqala. Iimbotyi kunye nee-ertyisi zibhengeza ingeniso kunye nenzuzo ephupheni.
Kutoliko oludumileyo lwamaphupha, ngawaphi amaphupha awenzayo ngemifuno nayo ibalulekile. Ukuba ubona uphawu lwephupha, ngakumbi imifuno eluhlaza, luphawu lwe ukusebenza nzima. Ukutyala kuyathembisa xa uphupha ulonwabo olunyanisekileyo. Ukuba ii-marigolds zikhuliswa ecaleni kwemifuno njengezokuzikhusela kwizitshabalalisi, uya kuphumelela el mundo yabalindi.
Ukusika imifuno ngemela kubonisa njengemeko yokuphupha umntu kufuneka ahlukane nombono wokufumana impumelelo enkulu kunye nemali eninzi. Uyabona ukuba udumo lwalungumnqweno nje kwaye kufuneka waneliswe zizinto ezincinci ebomini. Ukutyala imifuno kuhlala kubonisa ukwamkelwa zizinto ozenzileyo ngabanye.
Nabani na obona uhlaza olutsha egadini ephupheni kufuneka abe nethemba lokufumana imfihlo elusizi. Ukuthenga imifuno, mhlawumbi nakwivenkile yentengiso yeveki ngeveki, kunokuthetha iintlungu kunye nomsindo ekutolikweni kwephupha, kurhwebo kunye nalo lubhengeza impikiswano. Okokugqibela, ukutya imifuno yintetho engaziwayo Iindawo, Ukugula kunye ne-delirium.
Ukuba ucola imifuno ephekiweyo kwisitya sakho ngelixa ulele, unokumenyelwa kumbhiyozo. Njengomfanekiso ephupheni, imifuno enesosi inokubonisa iingxaki zempilo. Ukunuka kwemifuno ebolileyo xa ulele kuhlala kuyenza icace into yokuba into eza kuphela kwilizwe elivukayo.
Uphawu lwephupha «imifuno» - ukutolikwa kwengqondo
Kwelinye icala, imifuno ifanekisela amandla, isondlo kunye nempilo, kwelinye icala ikwabonisa ukuzola kunye nokudikwa. Kugwetyelwe ukuhlala kungashukumi, ityale njengazo zonke izityalo. Kwitoliki yamaphupha, uphawu lwephupha luhlala lubonakalisa Iimvakalelo zokuqala.
Isalathiso sesini siyacaca: imilo yemifuno inokwabelwa ilungu lobufazi okanye lendoda. Ukuba imifuno enjalo ikhulile ephupheni, ibonisa umnqweno wokungazi ukwaneliseka ngokwesondo.
Ukusetyenziswa okanye ukulinywa kwemifuno, edumbayo, ngamanye amaxesha ibonakalisa okwasemzimbeni okanye ephupheni. uxinzelelo lweemvakalelo ububanzi.
Ukuba isimboli yephupha "imifuno" iphekwe ixesha elide ngenxa yephupha, ukuze ekugqibeleni icocwe, ibonisa isimilo esiphazamisayo ukoyisa ingxaki. Ujolise kakhulu kwaye unomdla kakhulu kubunzima okanye kwiqabane lakho, elikongamele. Umphuphi kufuneka azi ngezi meko kwaye azame ukutshintsha into ngazo.
Uphawu lwephupha «imifuno» - ukutolika kokomoya
Isimboli yamaphupha "imifuno" ifumaneka ekutolikeni amaphupha ngokunxulumene nokutya kwendalo kunye nombuzo wokuba amaphupha anqwenela ntoni.
Ngengqiqo yokomoya, kufuzisela oko ubuchule bengqondo yokuphupha.